** Inkwenkwezi ezintlanu ezinama-481 ophononongo oluhle!!**🌻 - I-Airbnb
** Inkwenkwezi ezintlanu ezinama-481 ophononongo oluhle!!**🌻
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguNiki
*** Isitudiyo esimangalisayo kwi-Eilat ***
Ubumelwane obukhulu, obuzolileyo kwaye kude nengxolo yeziko le-Eilat. Zonke izinto eziluncedo zikumanyathelo nje ambalwa ukusuka. Isitudiyo esipholileyo esinayo yonke into oya kuyidinga ngokuhlala kwakho, egcwele iintliziyo nothando kunye ne-2 yomoya-i-cons KUFUNEKA e-Eilat !!!!!!
Sinebhongo nge-5 STARTED RATED ***** isitudiyo sokuziphekela (isidlo sakusasa asibandakanywa) kwirenti yemihla ngemihla okanye yeveki.
** Ukutshaya ngaphandle egadini kuphela.
*Ikhitshi yeGalley enefriji/isikhenkcezisi, ioveni encinci yetoaster, isitovu segesi, nazo zonke izixhobo zasekhitshini.
*Kunikwe iti, ikofu, kunye nobisi.
*Igumbi lokuhlala eline-cable T.V. Wi-Fi air-con.
*Igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye nendawo eninzi yewodrophu kunye ne-air-con.
*Coca amashiti kunye neetawuli kunye neetawuli zaselwandle.
*Iipakethi zomkhenkce kunye nebhegi epholileyo yokuthatha iipikiniki zakho.
*Indawo entle yokuhlala ngaphandle yokufunxa imozulu entle yelanga ye-Eilat !!
Zonke izinto ezikhangayo zasekhaya yimizuzu emi-5 yokuqhuba. Ukuhamba ngemizuzu engama-20 ukuya elwandle okanye imizuzu emi-5 ngemoto kwaye ngethamsanqa ukuba ube kude neeklabhu kunye nee-pubs ze-Eilat! Ivenkile enkulu yasekhaya kukuhamba ngemizuzu emi-2 ngasekunene kwestudiyo kwaye ivenkile ye-24/7 ingaphaya kwendlela.
Indawo yokupaka ilungile, isimahla, kwaye ilungile ngaphandle kwestudiyo.
Yiza uhlale kwisitudiyo sethu esimangalisayo e-Eilat. Umninimzi waseBrithani oya kuvuya ngakumbi ukukunceda ngayo yonke imibuzo yakho malunga no-Eilat kunye noSirayeli ngokubanzi kwaye ngubani owenzekayo ukuba abe nomyeni omkhulu ongumkhokeli wabakhenkethi !. Ndiyathemba ukukubona kungekudala!
Amaxabiso anokwahluka ngokwexesha kunye nexesha lokuhlala.
Kufuphi: Iindawo zokutyela-iBrazil encinci, iCasa da Brazil, iPedro's.
Ivenkile enkulu ngqo phezu kwendlela.
I-24/7 i-mini-market ukuhamba kwemizuzu emi-3.
Iziko lokuthenga elikhulu elingahlawulelwa rhafu (imizuzu eyi-10 uhamba)
Zonke iivenkile zokutyela zikaEilat kunye namaziko okuthenga zi-5, 10, 15, okanye 20 - ukuhamba ngemizuzu.
4.95 out of 5 stars from 499 reviews
4.95 · Izimvo eziyi-499
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi499
Indawo entle, intle kwaye izolile. Yonke into ikufutshane kodwa kude ngokwaneleyo kude nee-pubs kunye neeklabhu e-Eilat!
Ivenkile enkulu engaphaya kwendlela kunye neMarike engama-24/7 encinci imizuzu emi-3 kude.
Umbuki zindwendwe ngu- Niki
Ngena kwaye ujonge kwaye undwendwele ngamanye amaxesha ukujonga ukuba yonke into isendleleni okanye ukuba iindwendwe zidinga nantoni na.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Eilat